I-china MS Electrical High Pressure multistage water centrifugal pump mveliso kunye nabenzi | IsiTongke
Impompo yamanzi yohlobo lwe-MS isetyenziselwa ukuhambisa amanzi acocekileyo kunye nolwelo olungathathi hlangothi lwamanzi emingxunya kunye neenkozo eziqinileyo≤ 1.5%. Ingxangxasi <0.5mm. Iqondo lobushushu lolwelo alikho ngaphezulu kwama-80º C. Iqondo lobushushu lolwelo alikho ngaphezulu kwama-80º C. Iimpompo zilungele unikezelo lwamanzi kunye nemisele yamanzi emigodini, kwimizi-mveliso nasezixekweni.
Qaphela: Xa imeko ikumgodi wamalahle, kuya kusetyenziswa uhlobo lobungqina boqhushumbo.
I-MS 280-43 (A) X3
NKSK : Impompo yam eyambekayo ye-centrifugal
280: Ixabiso lomthamo kwindawo eyenzelweyo yempompo (m3 / h)
43: Ixabiso lesentloko elikwinqanaba elinye kwindawo eyenzelweyo yempompo (m)
(A): Uyilo lwesibini
3: Inqanaba lesigaba sempompo
Uhlobo lwe-MS lokumpompa
1. Ukufakwa ngokulula kunye nokuhamba;
2. Impompo yenkxaso yomzimba yi-ankile iqinisekisa ubume obuzinzileyo kunye nokuxhathisa okuphezulu kwiziko kunye nokugqwetha okubangelwa ngumthwalo womgca;
3. Akukho uyilo lokulayisha ngaphezulu, qiniseka ukuba ukusebenza kusebenza ngokuzinzileyo;
4. Yamkela imodeli yesanti esemgangathweni esemgangathweni qinisekisa ukusebenza ngokukuko kokusebenza kunye nokusebenza okuhle kokulwa nokucoca;
5. Ukupakisha itywina kunye noomatshini itywina ziyafumaneka.
6. Sebenzisa izinto ezahlukeneyo ngolwimi olwahlukileyo.
7. Uluhlu ngokubanzi lwesicelo
Ilungele eyam, eyokubonelelwa kwaManzi esiXeko kunye noBunjineli boGutyulo
Dlulisa amanzi aphakathi nendawo, ngaphandle kwamasuntswana aqinileyo, ubushushu obungaphantsi kwama-80 ° C
Ukulungele ukuhambisa amanzi kwibhoyila okanye ukuhambisa okuphakathi okufanayo ngamanzi ashushu, ngaphandle kwamasuntswana aqinileyo, ubushushu obungaphantsi kwe-105 ° C Ilungele intsimbi yentsimbi, eyam, inkqubo yokuhambisa amanzi amdaka.
Dlulisa amanzi asemigodini ngomxholo oqinileyo wamasuntswana phantsi kwe-1.5% okanye ilindle elifanayo, ubushushu obungaphantsi kwama-80 ° C
Ukulungele ukuhambisa ulwelo olunolwelo ngaphandle kokusebenza okuqinisekileyo, ubushushu phakathi -20 ° C ~ 105 ° C
Ukulungele ukuhambisa iimveliso zeoyile kunye nepetroleum ngaphandle kokusebenza okuqinileyo, ubushushu phakathi -20 ° C ~ 150 ° C, viscosity under 120cSt
KUTHENI UKUKHETHA IIMPAWU ZE-TKFLO
♦ Gxila kwizicelo zeSiko kunye nenkonzo
Sibonelela ngeenkonzo zepremiyamu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, ukoneliseka kwabaThengi yinto ebalulekileyo yokulinganisa umgangatho weemveliso.
Iqela leNjineli ePhakamileyo ePhambili
Bamba iingcali ezahlukeneyo kunye namava asebenzayo eqela lezobuchwephesha, kubandakanya utitshala oqeqeshiweyo, unjingalwazi omnye, iinjineli ezi-5 eziphezulu kunye neenjineli ezingaphezu kwe-20 zokuphucula ubuchwephesha bezobuchwephesha kunye nokuyila kunye nokubonelela uluhlu olupheleleyo lwenkxaso yezobuchwephesha kunye nolungileyo emva- inkonzo yokuthengisa.
♦ Umgangatho ophezulu womthengisi wenxalenye
Ababoneleli bemigangatho yokuphosa umgangatho ophezulu; Iimpawu ezaziwayo zamazwe aphesheya nezasekhaya zoomatshini, ukuthwala, iimoto, ipaneli yokulawula kunye neenjini zedizili ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi bethu. Isebenzisana ne-WEG / ABB / SIMENS / CUMMININS / VOLVO / PERKIN ...
♦ Inkqubo engqongqo yoLawulo loMgangatho
Umenzi ulandela ngokungqongqo i-ISO9001: Inkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015 kunye nenkqubo yolawulo lwe-6S. Unokuqiniseka ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana neethenda zomgangatho ofunekayo. Ingxelo yezinto ezibonakalayo, ingxelo yovavanyo lwentsebenzo ... kunye novavanyo lomntu wesithathu ziyafumaneka.
♦ Inkonzo yokuthengisa kwangaphambili
Uphando kunye nenkxaso yokubonisana. Iminyaka eli-15 yokumpompa amava obuchwephesha- Inye-ukuya-kwenye-injineli yokuthengisa inkonzo yobuchwephesha- Umnxeba oshushu wenkonzo uyafumaneka nge-24h, uphendule nge-8h.
♦ Emva kwenkonzo
Ukuvavanywa kwezixhobo zoqeqesho lobuchwephesha; -Ukuhlohla kunye nokulungisa ingxaki yokuSombulula; Uhlaziyo lweSondlo kunye nophuculo; -Iwaranti yonyaka omnye. Nika inkxaso yobuchwephesha simahla kubo bonke ubomi beemveliso. -Gcina ubomi bonke benxibelelana nabathengi, fumana ingxelo ngokusetyenziswa kwezixhobo kwaye wenze umgangatho weemveliso uqhubeke ugqibelele.
Egqithileyo I-ANS (V) Uthotho lweSephu soHlulo soMbane lweCentrifugal Pump
Okulandelayo: I-API610 ANSI yeNkqubo yeMichiza esemgangathweni yePethemhemical Heavy Crude Fuel yokuGqithisela i-Pump
Ububanzi I-DN 80-250 mm
Umthamo 25-500 m3 / h
Ubushushu boTywala ukuya kuthi ga kuma-80 ºC
2.Ukusebenza okuzinzileyo kokunyanzelwa kokutsala okuphindwe kabini kuyenza ukuba amandla e-axial ancitshiswe ubuncinci kwaye inesitayile sendlela yokusebenza okuhle kakhulu kwe-hydraulic, zombini umphezulu wangaphakathi wepompo kunye nomphezulu wokunyanzelwa, ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo agudileyo kwaye abe nokusebenza okuphawulekayo komphunga ukumelana kunye nokusebenza kakuhle.
6. Umgangatho esisangqa: GB, HG, Din, umgangatho ANSI, ngokweemfuno zakho.
Ukucwangciswa kwezinto eziCetyiswayo
Ukucwangciswa kweMathiriyeli ekucetyiswayo (Isalathiso kuphela)
Umba Amanzi acocekileyo Sela amanzi Amanzi amdaka Amanzi ashushu Amanzi olwandle
Ityala kunye neKhava Isinyithi i-HT250 I-SS304 Intsimbi Ductile QT500 Intsimbi yeCarbon Engayi kabini SS 2205 / Ibronzi / SS316L
Ukunyanzelwa Isinyithi i-HT250 I-SS304 Intsimbi Ductile QT500 2Cr13 Engayi kabini SS 2205 / Ibronzi / SS316L
Ukunxiba isangqa Isinyithi i-HT250 I-SS304 Intsimbi Ductile QT500 2Cr13 Engayi kabini SS 2205 / Ibronzi / SS316L
Shaft I-SS420 I-SS420 40Cr 40Cr Iphindwe kabini SS 2205
Shaft umkhono Intsimbi yeCarbon / SS I-SS304 I-SS304 I-SS304 Engayi kabini SS 2205 / Ibronzi / SS316L
Ngokuphawula: Uluhlu oluneenkcukacha eziphathekayo luya kuhambelana nolwelo kunye neemeko zesiza
QAPHELA ngaphambi komyalelo
Iiparameter eziyimfuneko kufuneka zingeniswe ngokulandelelana.
1. Imodeli yepump kunye nokuhamba, intloko (kubandakanywa ukulahleka kwenkqubo), i-NPSHr kwindawo yokusebenza.
2. Uhlobo lwesitywina se-shaft (kufuneka kuqatshelwe nokuba kukutywinwa komatshini okanye ukupakisha kwaye, ukuba akunjalo, ukuhanjiswa kwesakhiwo somatshini kuya kwenziwa).
3. Ukuhambisa isikhombisi sempompo (kufuneka kuqatshelwe kwimeko yokufakwa kweCCW kwaye, ukuba akunjalo, ukuhanjiswa kofakelo lwewotshi kuya kwenziwa).
4. Iiparameter zemoto (Y uthotho lwemoto ye-IP44 isetyenziswa ngokubanzi njengemoto enevolthi esezantsi enamandla <200KW kwaye, xa usebenzisa enye yevolthi ephezulu, nceda uqaphele umbane wayo, inqanaba lokhuselo, iklasi yokugquma, indlela yokupholisa , amandla, inani le-polarity kunye nomenzi).
5.Izinto zokufaka impompo, impeller, shaft njl. (ukuhanjiswa nolwabiwo oluqhelekileyo kuya kwenziwa ukuba ngaphandle kokuqwalaselwa).
6. Ubushushu obuphakathi (ukuhanjiswa kubushushu obuphakathi rhoqo kuya kwenziwa ukuba kungakhange kuqatshelwe).
7. Xa indlela eza kuthuthwa ibonakalisa okanye iqulethe iinkozo eziqinileyo, nceda uqaphele iimpawu zayo.
Ewe, besikwimveliso yokumpompa nakwimveliso yentengiso yaphesheya ngaphezulu kweminyaka eli-15.
Umbuzo Zeziphi iimarike ezithumela ngaphandle iimpompo zakho?
Ngaphezulu kwamazwe angama-20 kunye neendawo, ezinje nge-Mzantsi-Mpuma Asia, i-Yurophu, uMntla noMzantsi Melika, i-Afrika, i-Oceanic, amazwe akuMbindi Mpuma…
Umbuzo. Loluphi ulwazi ekufuneka ndikwazise lona ukuba ndifuna ukufumana ikoteyishini?
Nceda usazise amandla empompo, intloko, aphakathi, imeko yokusebenza, ubungakanani, njlnjl njengoko ukubonelela kwakho, ukuchaneka kunye nokukhetha imodeli ngokuchanekileyo.
Umbuzo Ngaba iyafumaneka ukuprinta uphawu lwethu kwimpompo?
Iyamkeleka ngokupheleleyo njengemithetho yamazwe ngamazwe. Umbuzo 5. Ndingalifumana njani ixabiso lempompo yakho? Unokunxibelelana nathi ngayo nayiphi na kwezi nkcukacha zonxibelelwano zilandelayo. Umntu wethu wenkonzo elungiselelwe wena uya kukuphendula ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Izakhiwo eziphakamileyo zonikezelo lwamanzi, inkqubo yokulwa nomlilo, ukutshiza amanzi ngokuzenzekelayo phantsi kwekhethini yamanzi, ukuthuthwa kwamanzi okuhamba umgama omde, ukujikeleza kwamanzi kwinkqubo yokuvelisa, ukuxhasa ukusetyenziswa kwazo zonke iintlobo zezixhobo kunye nenkqubo yokuvelisa amanzi, njl.
Unikezelo lwamanzi kunye nomsele wamanzi
Iihotele, iivenkile zokutyela, ukuzihlaziya efrijini kunye nomoya obonelela ngamanzi
Iinkqubo zokukhuthaza; Ukuhambisa amanzi kwibhoyile kunye nokujiya; Ubushushu kunye nomoya
Unkcenkceshelo; Ukujikeleza; Icandelo; Iinkqubo zokulwa nomlilo; Izityalo zamandla.
Icandelo leProjekthi yeSampulu
I-200MS TYPE YEMPUPHE ESETYENZISWE KWISICELO SOMGODI WAMALAHLE